Kulan ka tirsan tartanka Degmooyinka gobalka Banaadir ayaa galabta la cayaare doona %
Kulan ka tirsan tartanka Degmooyinka gobalka Banaadir ayaa galabta la cayaare doona
By Ramzi Yare	 On Sep 13, 2018
Kulan ka tirsan tartanka degmooyinka ayaa galabta la cayaari doona waxaana is arki doona degmooyinka kala ah Xamar Wayne iyo Hodan, kulankan ayaa qeyb ka ah wareega sided dhamaadka tartanka degmooyinka Gobolka Banaadir.
Cayaartan ayaa si caadiga ah waxaa lago balansan in la ciyaaro 10-bishan oo ay ku beegneyd maalintii isniinte ee la soo dhaafay balse Qarax ka dhacay degmada Hodan ayaa loo baajiyay kulankan.
Degmooyinka kala ah Hodan iyo Xamar Wayne ayaa galabta isku afara saari doona garoonka Banaadir Stadium ee dhaca Degmada Cabdicasiis, ciyaartan ayaana ah mid aad u xiiso badan, maadama ay labada degmo diyaargarow u soo galeyn kulankan.
Degmada Xamar Wayne ayaa ka soo baxday Guruup-ka D, kaalinta 2-aad halka Degmada Hodan ay kaalinta koowad ugu soo baxday Guruup-ka B.
Wiilasha Xamar Wayne tartankan waxey ku guuleysten sanadkii 2014-kii markaas oo ay ka qaadeyn degmada Waaberi, halka Hodan ay Finaal gaartay sanadkii ugu dambeyay, balse nasiib daro waxaa ka faro maroojisay xulka Degmada Waaberi.
Wareega Sideed dhamaadka waxaa hada joogtay degmada Waaberi kadib markii ay ka soo adkaatay degmada Boondheere, waxeyna sugeyn midkood midi soo baxday galabta degmooyinkan Xamar Wayne iyo Hodan.
Tartanka: Degmooyinka Gobolka Banaadir
Kooxaha: Xamar Wayne Vs Hodan
Modric oo Caddeeyey In uu Sida Ronaldo ka Wal walidoonin Abaal-marinta Adduunka ogow sababta
Shirkada EA Sports oo soo saartay Magacyada 10 ka Cayaaryahan ee ugu fiican